एक वर्षमा चौध गैंडाको उद्धार ! - Gokarna News
एक वर्षमा चौध गैंडाको उद्धार !
शनिबार, फागुन ११, २०७५ by Gokarna News
भरतपुर– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले एक वर्षको अवधिमा विभिन्न क्षेत्रबाट चार गैँडाको उद्धार गरेको छ ।
मानवबस्तीमा नियमित पसेर धनजन तथा बालीको क्षति गर्ने र बाढीले बगाएका गैँडाको उद्धार गरी निकुन्जको मुख्य क्षेत्रमा छाडिएको हो । निकुञ्जको पश्चिम सेक्टरबाट बस्तीमा निस्केका र बाढीले बगाएका चार गैँडाको उद्धार गरेर निकुञ्जको पूर्वी सेक्टरमा छाडिएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदकुमार ढकालले बताए ।
“निकुञ्जको पूर्वी सेक्टरमा भन्दा पश्चिम सेक्टरमा गैँडा धेरै भेटिएको छ”, उनले भने “त्रिवेणीभन्दा माथि भएका गैँडालाई पूर्वी क्षेत्रमा सार्ने योजना बनाएका छौँ ।” यस वर्ष हुने गैँडा गणनापश्चात विभाग र प्राविधिकको सल्लाहअनुसार गैँडा सार्ने काम गरिने उनको भनाइ छ ।
हालको गैँडाको सङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने अहिले पश्चिम सेक्टरबाट पूर्वी सेक्टरमा सार्नु जरुरी देखिएको निकुञ्जले जनाएको छ । “कुनै पनि संरक्षित क्षेत्रको वन्यजन्तु सङ्ख्या धान्न सक्ने क्षमता (केरिङ क्यापासिटी) हुन्छ”, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामकुमार अर्यालले भने, “पूर्वभन्दा पश्चिम सेक्टरमा धेरै गैँडा छन् ।” उनले बाढीका कारण पूर्वी क्षेत्रबाट बगाएर ल्याएका गैँडाको सङ्ख्या पश्चिम क्षेत्रमा बढेको बताए ।
ब्रेकरले च्यापिएर एक जनाको ज्यान गयो
ओखलढुंगामा एउटा वडा अध्यक्षले अर्कोलाई कुटेपछि…
साउनको शुरुआतसँगै हरियो चुरा र पोतेको बिक्री तीव्र !
विद्यार्थी नेताले वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्रमुखको कोठामा आगो लगाएपछि…
किसानको लागि खुसीको खबरः दुहुना भैंसी पाल्नेलाई एक लाख अनुदान